ကျွန်တော်ချစ်သောသူငယ်ချင်းများ: စုဆောင်းထားတာလေးတွေ for all my lovely friends
ကျွန်တော်စုဆောင်းထားတာလေးတွေပါ . .
တရားတော်တွေ၊ မှတ်စုလေးတွေနဲ့ ဟိုနေရာဒီနေရာတွေကရလာတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို
အကြိုက်ချင်းတူတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ မျှဝေခံစားလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာပါ . .
တရားတော်တွေမှာတော့ သီတဂူဆရာတော်ဘုရားရဲ့ တရားတွေများပါတယ် . .
Dhammadownload.com ကနေ ကူးထားတာပါ.
အဲဒီကိုသွားချင်ရင်တော့ ဒီနေရာ ကနေသွားလို့ရပါတယ် . .
မှတ်စုတွေကတော့ web site တွေကနေတူရာလေးတွေစုပြီး pdf ပြန်လုပ်ထားတာပါ . .
သီချင်းတွေကတော့အစုံပါဘဲ၊ ကြိုက်လို့ကတော့ ကူးသွားလိုက်ပါ . .
အင်း . . copyright တွေကိုတော့ ကြောက်တယ်ဗျာ . .
နောက်ပိုင်းဆိုရင် ဒီလိုမှပေးလို့ ရပါတော့မလားမသိဘူးဗျာ . .
လောလောဆယ်တော့ file တွေကို အမြဲ update လုပ်နေမှာပါ
အဆင်မပြေတာရှိရင်လည်း အောက်မှာပြောခဲ့ပါနော် . .
သူငယ်ချင်းများအားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ . . .
အညွှန်း - ဂီတ music, စာအုပ် Book, တရား Dhamma, တရားတော် TayarDaw
အင်တာနက်ကနေ Share လုပ်ကြမယ်
How to get money via Internet
၀င်းအင်းဝ မှ ဇော်ဂျီသို့ အကူးအပြောင်း
သီလသည် လူသားတိုင်း၏ ဘ၀တန်ဘိုး
မြတ်စွာဘုရား၏ဂုဏ်တော် (၉) ပါး အနက်အဓိပ္ပါယ်